တကူ သားလေး ရဲ့ နည်းပညာ စုစည်းမှု: facebook ရဲ့account setting အကြောင်း အပိုင်း( ၂ ) ။
facebook ရဲ့account setting အကြောင်း အပိုင်း( ၂ ) ။
facebook ရဲ့ account setting အကြောင်း အပိုင်း( ၂ ) ။
facebook ရဲ့setting ထဲက pivacy နှင့်timeline tagging အကြောင်းလေးကို နည်းနည်းရှင်းပြပေးပါမယ်။ဒီနှစ်ခုအကြောင်းကိုသိသွားပြီဆိုရင် တော့မလိုလားအပ်တဲ့ သူငယ်ချင်း
မိတ်ဆွေတွေ ကို ဘယ်လို ကြို တင်ကာ ကွယ် ထားရမယ်ဆို တာ သဘောပေါ က် သွားမှာပါ။အောက်မှာပုံကလေးတွေနှင့် အသေးစိတ်ရှင်းပြပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။
pivacy setting tools
pivacy setting tools မှာတော့ဘယ်သူတွေက မိမိရဲ့ ပိုစ်တွေ မြင်တွေ့ ရမယ် ။ ဘယ်သူတွေ က မိမိကို ဆက်သွယ် လို့ ရနိုင်တယ်စသည်ဖြင့် ထိမ်းချူပ်လို့ ရပါတယ်ခင်ဗျာ။
who can see my styff ?
ဒီကောင်လေးကတော့မိမိတင်တဲ့ ပိုစ်တွေ ကိုဘယ်သူတွေကိုကြည့် ခွင့် ပေးမလဲစသည်ဖြင်းထိမ်းချူပ်လို့ ရပါတယ်။(ဥပမာ-မိမိရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကိုလား........? မိမိတစ်ယောက်တည်းလား......စသည်ဖြင့် ထိမ်းချုပ်လို့ ရပါတယ်။who can see future posts ? ဆိုတဲ့ နေရာမှာတော့မိမိရဲ့ ပိုစ်တွေ ကို ဘယ်သူတွေကို ကြည့် ခွင့် ပေးမလဲ ဆိုတာရွေးချယ်လို့ ရပါတယ်ခင်ဗျာ။
ဒီအောက်ကကွင်းထဲက use active log ဆိုတာကတော့ မိမိ like လုပ်ပြီး ကွန်မန့် ပေးထားတာတွေကိုတစ်စုတစ်စည်းတဝေး တည်းမှာ ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။
limit past posts ဆိုတာကတော့အရင် မိမိတင်ခဲ့ တဲ့ ပိုစ်အဟောင်းတွေကို ကန့် သတ်ဖော်ပြလို့ ရပါတယ်
who can contant me
who can contant me ဆိုတာကတော့မိမိကိုဘယ်သူတွေက အကောင့် အပ်နိုင်တယ်(သူငယ်ချင်းအပ်နိုင်တယ်)စသည်ဖြင့် ထိမ်းချူပ်ထားလို့ ရပါတယ်။ basic filteringဆိုတာကတော့မိမိတို့ ရဲ့ inbox ထဲကို message တွေကိုထိမ်းချူပ်ဖို့ အတွက်ပါ။
who can look up ..?
who can look up ..? မှာတော့နှစ်မျိုးရှိပါတယ် တစ်ခုက တော့ မိမိဖုန်းနံပါတ်တွေအီးမေးနဲပါတ်တွေကိုသုံးပြီးမိမိကိုရှာဖွေတာကိုထိမ်းချူပ်တာနှင့် seach engine (search engine ဆိုတာကတော့google, yahoo,bring ) စတဲ့ရှာဖွေရေး အင်ဂျင် တွေ ကိုမိမိ acount ကိုရှာဖွေခွင့် ပြုမပြု ဆိုတာကို ထိမ်းချူပ်လို့ ရပါတယ်။
timeline and tagging setting မှာတော့ အပိုင်း(၃) ပိုင်းရှိပြီးအောင်မှာအပိုင်းခွဲလေးတွေကိုအသေးစိတ်
ရှင်းပြပေးထားပါတယ်။ဒီပုံကတော့ သာမန်အကောင့် တစ်ခုအတွက်ယေဘုယျ
who can add thing to my timeline ..?
who can add thing to my timeline ..? ဆိုတာကတော့ မိမိ မိတ်ဆွေတွေကမိမိရဲ့timeline ထဲကို
ပိုစ်တင် ဖို့ အတွက် ကို ထိမ်းချုပ်လို့ ရပါတယ် ။မိမိ timeline ထဲက တစ်စုံတစ်ယောက်ယောက်က
ပိုစ်တင်ခွင့် မပြုချင်ဘူးဆိုရင် အောက်ကပုံလေးထဲကလို only me လုပ်ထားရင်ဘယ်သူမှ ပိုစ့် တင်လို့ မရပါဘူးခင်ဗျာ။
Who can see what others post on your timeline? မှာတော့မိမိရဲ့ timeline ထဲမှာ ပိုစ့် လာတင်ရင် အရင်ဆုံး delay လုပ်ထားလို့ ရပါတယ်။မိမိကဖတ်ပြီးလို့ သဘောကျမှ ခွင့် ပြုမှ ပိုစ်ကို လူအများမြင် ရအောင်ထိမ်းချုပ် လို့ ရပါတယ်။
ဒီအဆင့် မှာတော့ အရေးကြီးတဲ့ နှစ်ခုကိုရှင်းပြပေးပါမယ်။မိမိကို tag လုပ်တာကိုပိတ်ထားလို့ ရသလို
မိမိ timeline ထဲကပိုစ့် တွေကို ဘယ်သူတွေကိုဖတ်ခွင့် ပေးမယ်ဆိုပြီးခွင့် ပြုပေးလို့ ရပါတယ်။
ဒီအဆင့် မှာတော့ 
Review tags people add to your own posts before the tags appear on Facebook? ဆိုတာကတော့ မိမိသူငယ်ချင်းတွေကို tag မလုပ်ခင် review ကြည့် ခွင့် ကို အဖွင့် အပိတ် လုပ်ပေးလို့ ရပါတယ်။
ဒီကောင်ကတော့မိမိ တင်လိုက်တဲ့ ပိုစ်တစ်ခု ကို မိမိသူငယ်ချင်းတွေက သူတို့ဝင်ရောက် tag လုပ်ခွင့် ရှိမရှိ ကိုထိမ်းချုပ်လို့ ရပါတယ်။(ဥပမာ-မိမိ ရဲ့ပုံမှာ ၄င်းတို့ ရဲ့ နာမည်ကို ဝင်ရောက်ရေးခွင့် ပြုမပြု စတဲ့ နေရာတွေမှာ သုံးပါတယ်။
ဒီကောင်လေးကတော့ မိမိ တင်လိုက်တဲ့ ပုံတွေကို ဘယ်သူ့ ကိုပေးကြည့် မယ် စသည်ဖြင့် ထိမ်းချူပ်လို့ ရပါတယ်။
FACEBOOK ရဲ့ အကောင့်SETTING အပိုင်း(၁ ) ကိုဖတ်ချင်ရင်